Soomaaliya ajnabiga ayaa laga jecelyahay waddaniga ah W/Q: Ayaanle Xuseen Cabdi | Gaaloos.com
Home » News » Soomaaliya ajnabiga ayaa laga jecelyahay waddaniga ah W/Q: Ayaanle Xuseen Cabdi
Soomaaliya ajnabiga ayaa laga jecelyahay waddaniga ah W/Q: Ayaanle Xuseen Cabdi
Marka aad eegto aragtida guud ee mujamaca Soomaalida, gaar ahaan dhinacyada ugu waaweyn dalka sida siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga, caafimaadka iyo xitaa waxbarashada waxaa saameyn toos ah iyo mid dadbanba kuleh dad shisheeya ah.
Siyaasadda: Shirka siyaasadeed ee Soomaalida wax qiimo ah umalaha siyaasiyiinta iyo dadweynaha hadii aysan ka dhax muuqan qof ama koox ajnabi ah oo cadaan iyo modowba leh. Waxaana lagama maarmaan ah in boorarka shirka lagu hardho Af Shisheeye kulamadana looga hadlo Af qalaad.
Dhaqaalaha: Dhaqaalaha Soomaaliya sida madaxda iyo shacabkuba rumeysanyihiin ma kobcayo, haddii aan ilaha dhaqaale ee waaweyn, sida dakadaha, garoomada diyaarada iwm lagu wareejin shariikado shisheeye.
Ganacsiga: Shariikadaha ganacsiga ee kala duwan ee dalka magac iyo sumcad ma yeelanayaan oo dadweynuhu ma aaminayaan haddii uusan maamulka kamid ahayn qof ajnabi ah
Caafimaadka: Goobaha Caafimaadka waxaa dadweynaha lagu soo jiitaa in la sheego laguna celceliyo xayaysiinta in dhakhaatiir ajnabi ah ay ka howlgalaan cisbitalkaasi ama xarunta caafimaad.
Waxbarashada: Goob waxbarasho ee Soomaaliya macno leh haddii aan lagu dhigeynin af shisheeye islamarkaana manhaj aadan ka keenin carabta,Kenya, Itoobiya ama Turkiga, waxba kaama soo galayaan oo dadku ma rabaan haddii aanu macalin ajnabi ah dhigeynin oo aan xayeysiinta idaacadaha lagu sheegin.
Waxaasi oo dhan waxaa ka sii weyn, waa waddanka kaliya ee xuquuqda bulshadeed marka la eego uu qofka ajnabiga ah 100% ka xushmad, qadarin iyo karaamo badanyahay qofka waddaniga ah.
Waa waddankaaga cidna kaama lahan hadaad tahay ajnabi, waxaana ugu sii fiican in aad tahay cadaan. albaab kasta waa lagaa furayaa cidna kuma hor istaagi karto, sababtoo ah adiga ayaaba waddaniga dhabta ah ka ah halkan ee ha is ka daahin.
Waji farxadeed baa lagu qaabilaa ajnabiga goor walba
Sidaa darteed qofkasta oo Ajnabi ah midabkuu doono hayeeshee Soomaaliya waa waddankiisa koowaad. Madaxdu addiga ayay kuu baahanyihiin waxayna habeen iyo maalin isku dayayaan in ay ku soo dhaweeyaan oo ay ku qanciyaan. Qofka Soomaaliga ah wey addagtahay in uu si fudud ku galo xafiisyada dowladda laakin addiga waxaan kuu balan qaadayaa in aad Villa Somalia gali karto waqti kasta iyo maalin kasta war war la’aan. Waxba ha shakinin waddankan addiga ayaa ammaankiisa, ilaaliya addiga ayaa biila madaxda, addiga ayaa wax walba ka ah ama u ah.
Go'aanka dalka waxaa gaara Ajnabi
Go’aanka dalka waxaa gaara Ajnabi
Waan hubaa hadaad tahay ajnabi karaamo iyo awood aadan ku lahaan jirin waddankaaga ayaad ka heleysaa Soomaaliya, sababtoo ah waa waddan shacab iyo madaxba ajnabigu aad iyo aad ula weyn yahay. waa waddan taladiisa aad tahay qofka koowaad ee go’aan ka gaara, waa waddan muwaadiniinta iska leh aysan marnaba ka diideynin amarkaaga su’aal ka keeni Karin! Ku soo dhawoow Soomaaliya ciddi kaama lahan.
Title: Soomaaliya ajnabiga ayaa laga jecelyahay waddaniga ah W/Q: Ayaanle Xuseen Cabdi